Ny Fahatsorana ao amin'i Jesosy - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
2Kor 11: 3 “Fa matahotra aho, f’andrao ny sainareo ho simba hiala amin’ ny fahitsiam-po sy ny fahadiovana amin’ i Kristy, tahaka ny namitahan’ ny menarana an’ i Eva tamin’ ny fihendreny”.
Anisan’ny ao anatin’ny fampianarana tsy misy kilema ny fampianarana ny Fahatsoran’i Kristy. Ary tokony ho toetra hita eo amin’ny Kristianina, ny mpino, ny olona efa nateraka indray izany.
1-Jesosy dia tsotra:
Tsy mba sarotiny izay izy teto an-tany, tsy nanasaro-javatra. Tsy be « kipitsopitsony » fa olona niaina tao anatin’ny fahatsorana. Tso-po, tsotra fisainana, tsotra tamin’ny fomba fanao, ny fiteny sy ny fitafy. Ny natiorany mihitsy dia izay hoe izay tsotra izay. Tsy mba olona sarotra. Mora fanahy, tsy miavona am-po Matio 11:28. Ny fahotana ihany no mahasarotiny Azy.
Ny dikan’ny hoe tsotra ao amin’ny 2Kor11: 4 dia hoe tsy mifangaroharo, madio, tsy misy haitraitra sy hajejojejoana.
2-Ny zavatra nisy tao Edena:
Lavon’i Satana i Eva Gen 3: 1-7. Simba ny sainy, niala tamin’ny fahatsorana ao amin’i Kristy vokatry ny fitaka nataon’ny menarana (Satana) taminy.
Ilay menarana (Satana) no mamitaka, manimba, mampisitaka, hiala amin’ny fahamarinana, hiala amin’ny fahatsorana ao amin’i Kristy
Tokony hitoetra ao amin’i Kristy isika fa tsy hivoana Heb2: 1 : “Ary amin’ izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fandrao hindaosina hiala aminy isika” .
2Jao9: “Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin’ny fampianaran’i Kristy, dia tsy manana an’Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin’ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka.”
Ireo Apostoly sandoka, mpampianatra sandoka izay ampiasain’i satana (menarana) amin’izao fotoana, mitarika ny fiangonana (Eva) hiala amin’ny fahatsorana izay fampianaran’i Kristy.
Tonga Jesosy hanavotra, ilay Adama farany. Tapitra tao Aminy ny fahotana, ny fandovana fahotana, ny fanandevozan’ny ota noho ny rà nalatsany izay manadio, mamela heloka ary nohon’ny hazo fijaliana dia namorona olona vaovao. Izy ilay Olona faharoa: manomboka eo Aminy noho Izy nitsangana tamin’ny maty ilay olona vaovao ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna, mandova fandresena, mandeha araka ny fanahy fa tsy ara nofo, tsy andevon’ny ota.
Inona no zava-mitranga rehefa simba niala tamin’ny fahatsoran’i Kristy? Lasa naka ny toetran’ilay menarana, toetran’i Satana: tsy tsotra intsony, fa mifangaro, mifangaro fahotana, fetsifetsy, mpamitaka mba ahatanterahany ny saim-petsiny, lasa misy fizahozahoana, fireharehana, fieboeboana tahaka an’i Satana (Isaia 14: Losifera izay anjely feno fampirapiratana sy fahatsarana ary nikomy tamin’Andriamanitra ka nitaona ny anjely sy ny nohariana hiankohoka aminy sy hanaraka azy fa tsy hiankohoka sy hanaraka an’Andriamanitra).
Andriamanitratra anefa manohitra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana amin’ny manetry tena. Jakoba 4/6.
Marary ny fiangonana, marary ny firenena, andevon’ny ota, mahantra ara-panahy, ara-materialy satria tafasaraka tamin’Andriamanitra vokatry ny nataon’ny mpaminany sandoka, apostoly sandoka, mpampianatra sandoka, pastera sandoka izay hirahin’i Satana hamosavy ny fiangonana ka lasa mipaka amin’ny firenena iray manontolo. Poizina avy amin’ilay menarana no entin’ireo, tsy tsotra intsony fa simba ny saina ary niala tamin’ny fahatsoran’i Kristy. Tsy toriana intsony ny ràn’i Jesosy, ny fibebahana, ny fahaterahana indray, ny fahamasinana, ny teny ny amin’ny hazo fijaliana (fahadalana amin’izay ho very fa herin’Andriamanitra amin’izay ho vonjena hoy ny 1Kor1:18, ny tahotra an’Andriamanitra, izay tena Filazantsara ary manova sy manome fiainana satria Jesosy Kristy no ivony. Lazaina fa tsotra loatra izany, lazaina fa “classique, élémentaire, basique…..” dia nialàna ka nivily amin’ny zavatra sarotra sy sandoka. Mangidihidy sofina fa tsy mahazaka ny teny tsy misy kilema fa lasa mamorona mpampianatra ho azy mampianatra araka ny filany ka ampiala ny sofiny amin’ny teny marina tokoa ka hivily amin’ny anganogano. 2Tim4:3
Saika rano maloto, sakafo maloto, misy poizina mahafaty ankehitriny no mibahana, zaraina eo amin’ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara eto Madagasikara eo amin’ny haino aman-jery, amin’ny “internet”, any amin’ny trano fivavahana, indrindra fa ireo fivavahana antsoina hoe evanjelika. Rivotr’i Satana entin’ireo mpitory sandoka avy any Etazonia sy avy ao Afrika ao (Franc maçon, illuminati, Rose croix, sorcier,…) izay mamotika olona maro sy tokantrano maro satria ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana (hangalariny ilay teny tsy misy kilema ary afafiny ilay poizina, indaosiny hiala amin’ilay tena marina ny olona, ary dia vonoiny ka ringana)
3-Inona no toriana amin’izao vanim-potoana izao:
Filazantsaran’ny tany fa tsy Filazantsaran’ny lanitra. Filazantsaran’ny fananan-karena, izay filazantsaran’i Mamona (andriamanitry ny vola), resa-bola, fitiavam-bola. Lasa olombelona no ivon’ny filazantsara, mandefitra amin’ny fahotana ary andevon’ny fahotana.
Mamona = vola = halatra sy filàna maro = fijangajangana
Fanambarana olona, fanindrahindrana olona, fampiderana bika aman’endrika sy lamaody, lasa ao anaty haitraitra, fijejojejoana (luxure Rom13: 13) izay halan’Andriamanitra.
Antokom-pivavahana (orinasa ara-pivavahana):
Famoronana antokom-pivavahana maro izay mampisy fisarahana satria samy manana ny fombany sy faharesendahany kanefa milaza fa zanak’Andriamanitra, nateraka indray. Mampanantena harena be sy voninahitra eto an-tany, fiara raitra, “villa”, vola be,…. Tsy misy fahatsorana intsony. Menatra ny Pastera, ny Bishop sy ny tariny raha andeha an-tongotra hamonjy toerana iray na dia akaiky vita dia an-tongotra aza. Menatra izy ireo raha andeha taxi be, na andeha fiara tsotsotra, fa mila fiara hiaka farany, manaitra sy manintona ny maso, ary miavaka eo imason’ny olona. Tsy mba i Jesosy izany. Isaia 53:2-3 “…tsy nanana endrika na fahatsaran-tarehy Izy; Ary raha nijery Azy isika, dia tsy nisy hatsaran-tarehy haniriantsika Azy. Natao tsinontsinona sy nolavin’ ny olona Izy; lehilahy ory sady zatra ny fahoriana [Heb. lehilahy be fanaintainana sady fantatry ny faharariana], Ary tahaka izay tsy tian’ny olon-kojerena akory Izy; natao tsinontsinona Izy ka tsy mba nahoantsika”. Tsy mba soavaly ny azy no notaingenany fa zana boriky (Marka 11:7). Koa zovy amintsika no andeha ho sahy ihoatra azy ka hideradera, hanandra-tena sy hieboebo hafa tsy izay nosimbain’ny menarana ny sainy hiala amin’ny fahatsora-po an’i Kristy! Filipiana 2:5-8 “Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana”
Vehivavy lasa lohany:
Vehivavy mitondra ministera: pastera vehivavy, apostoly vehivavy, mpaminany vehivavy, sns…Raha dinihina tsara izay voalazan’ny Baiboly dia tsy misy mihitsy vehivavy nantsoin’Andriamanitra ka napetrany amin’izany iraka izany. Voalaza ao amin’ny Baiboly fa ny lahy no lohan’ny vavy (Efes 5: 23) ary mbola marina hatrany izany rafitra sy fitondràna izany amin’izao vanim-potoana hiainantsika izao ary mandra-piverin’i Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra dia manankery izany ka mila tandreman’ny fiangonany. Manan-danja ny vehivavy, manana ny maha izy azy. Natao voalohany indrindra hikarakara ny ankohonany (ny vady aman-janany sy ireo izay manampy azy ao) Ohabolana 31: 10-31. Tsy nataon’Andriamanitra ho an’ny vehivavy velively ny haka ny lohany sy ny fitondràna ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy manambany ny vehivavy izany fa izany mihitsy no toerany ary mahavita be izy raha toa mipetraka tsara eo amin’ny toerana izay hitiavan’Andriamanitra azy. Indrisy fa ankehitriny ny vehivavy dia tsy maka ny toerana izay nametrahan’ ny Tompo azy tany am-boalohany, hany ka ampiasain’i Satana hitondra fahapotehana eo amin’ny tontolon’ny fiangonana sy ny tokantrano (Misy fanahin’i Jezabela, ho resahintsika amin’ny fampianarana ao aoriana izany).
Ireo anarana na “titres”:
Mampisy elanelana sy fitsotokotokoana amin’ny fihazonana mafy ireo anarana maro toy ny hoe “Bishop, archibishop, apostoly, mpaminany…” ary mitomany fatratra mihitsy mba antsoina amin’ireo anarana ireo! Anarana izay tsy nentina avy any an-kibon-dreny fa noforonina. Ary vokatr’izany dia karakaraina manokana toa hitovy amin’ny mpanjaka eto an-tany na filoham-pirenena iray: omena fitoerana manokana ao am-piangonana, “fauteuil cuir” ho azy mivady, ary apetraka amin’ny fitoerana ambony ho hitan’ny rehetra, miaraka amin’ny akanjo mirebareba miloko midorehitra, mitondra vakana, manao satroka marani-doha, mitondra tehina. Toa emperora na mpanjaka no fijery azy. Matio 23: 5-7 “Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan’ny olona; fa ataony lehibe ny fylakiterany, ary ataony vaventy ny somotraviaviny. 6 Ary tia ny fitoerana aloha eo amin’ ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin’ ny synagoga 7 sy ny hoharabain’ ny olona eny an-tsena ary ny hataon’ ny olona hoe: Raby ô!” Mifanohitra tanteraka amin’ny endrika sy fomban’i Jesosy.
Vao tsy ela no nahitana tamina fahitalavitra iray mpivady malagasy izay manao fandaharana kristiana izay tsy mifampiantso amin’ny anarany mandritra ilay fandaharana fa mifampiantso hoe “bishop” sy “revérend” . Tena lavo niala tamin’ny fahatsoran’i Jesosy ary manao ahoana ny voka-dratsin’izany satria ireo mpivavaka ao aminy dia hitovy fisainana sy fomba aminy avokoa, marary hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paladia. Izany no antsoina amin’ny fiteny frantsay hoe “hypocrisie” izay azo adika hoe “comédie, cinema”. Ny “hypocrite” (mpihatsara ivelatsihy) dia antsoina hoe mpilalao sary mihetsika (acteur de cinema), tsy misy fahatsorana sy fahitsim-po fa endrika ety ivelany Lio 16:15: “Ary hoy Jesosy taminy: Hianareo dia mpanamarin-tena eo anatrehan’ ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo; fa izay zavatra heverin’ ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan’ Andriamanitra”
Ao koa ireo mpitarika ara-pivavahana izay antsoina hoe “dada”, “papa”, “neny” sy izay anarana hafa hitenenana azy. Jesosy fony Izy teto an-tany dia nilaza mazava hoe: “..Fa hianareo kosa aza mba mety hatao hoe: Raby ô; fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary hianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo; fa iray ihany no Rainareo, dia Izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika hianareo; fa iray ihany no Mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra” Endrey zany fahatsoran’i Jesosy !
Inona no niantsoana Azy teto an-tany ? : zanak’olona, zanaky ny mpandrafitra, zanak’ondrin’Andriamanitra. Fiantsoana tsotra ary manambara fanetren-tena.
Mpitoriteny 7: 29 “Indro, izao ihany no hitako: nataon’ Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona sain-kafa maro izy.”
Ireo endrika ivelany:
Tsy misy fahatsorana intsony amin’ny endrika ety ivelany. Miova ny fomba fiakanjo: akanjo lava mirebareba miaraka amin’ny loko marevaka, zioga, satroka be, tehina be misy hazo fijaliana (tsy eo amin’ny fiangonana zokiny irery intsony io fa ny fiangonana zandriny, fiangonana evanjelika dia manao io koa satria iray ihany ny loharanony dia tsy iza fa ilay menarana (Satana) izay nandavo an’i Eva ka nandavo azy ireo ihany koa! ) Ny Tompo anie hamindra fo ka hanàla izay manana fo tsotra sy mahitsy hiala tsy ho isan’ireo. Tsy mahita mihitsy isika ao amin’ny Baiboly, izay fanilon’ny tongontsika sy fanazavana ny làlantsika, soratra mandidy na mametraka ireo fomba fiankanjo ireo. Tsy mba nanao sahala amin’ireo ireo apostoly sy ny fiangonana voalohany ao amin’ny Baiboly, ao amin’ny Fanekena vaovao, tao aorian’ny nilatsahan’ny Fanahy Masina, fa tena Niaina tamin’ny fahatsorana tokoa araka ny fampianaran’i Kristy.
Lio19: 15 “Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio”
Maro be ireo milaza ho mpanompon’Andriamanitra no mihanika aviavy ary eny ambony aviavy, ambony noho i Jesosy. Midina ambany izy mijery an’i Jesosy ary Jesosy indray no mitraka mijery azy! Tadidio fa nisy aviavy nozonon’i Jesosy satria tsy nisy voa teny aminy fa raviny fotsiny (Marka 11: 12-14). Dia tahaka izany koa ny fiangonana maro ankehitriny. Tsara endrika ety ivelany ny trano fivavahana, manaitra maso, mijoalajoala, tsara loko, tsara rafitra. Ny mpikambana ao aminy dia raitra amin’ny alalan’ny fiankanjo sy ny pozy marevaka, mandrobona ary be raviny maitso tahaka ilay aviavy fa rehefa mijery azy akaiky Jesosy dia tsy mahita voa! Tsy misy voa mendrika ny fibebahana, tsy misy fahamasinana, tsy misy ao izany filazantsaran’ny hazo fijaliana izay manafaka olona sy mamonjy izany, izay Jesosy no ivony, fa toa resa-bola, fampitomboana vola sy vina ara materialy no mibahana, ary ny fanaon’izao tontolo izao no atao (fisainana, fomba fitafy, fomba fiteny, fomba fanao,…)
Ny vehivavy sy ny “fond de teint, maquillage”, fandokona volo, akanjo manara-batana (juste au corps,..)….hajejojejoana izany mifanohitra mihitsy amin’ny Filazantsara tena izy 1Pie3: 3-5 “Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjoana; fa aoka ho toetra miafina ao am-po, izay tsy mety ho lò, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imason’ Andriamanitra. Fa tahaka izany no niravahan’ ny vehivavy masina fahiny, izay nanantena an’ Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny”
Ny fiarakodia ho an’ny mpivavaka dia toa tsy mety intsony raha fiara tsotra fa toa efa misy modely sy marika fara fahambaniny apetraka. Lasa tian’ny kristiana ny “sophistiqué” ary tsy mety aminy intsony ny zavatra, tsotra”. Ny dikan’ny hoe sophistiqué raha ny dikany avy any am-piandohana mihitsy dia hoe: “voafitaka, voahodina, niova ho sarotra, tratran’ny fahalovana” ary izany mihitsy ny mahazo ny ankamaroan’ny fiangonana amin’izao fotoana. Simba niala tamin’ny fahatsoran’i Kristy
Eo amin’ny tontolon’ny hira ara-pilazantsara dia efa voapozina ihany koa. Simba ny saina ka niala tamin’ny fahatsoran’i Jesosy. Lasa anarana tarika, anarana mpihira no malaza. Olombelona nofo aman-dra, izay vovoka sy zavona miseho vetivety no malaza ary dia maro koa moa ny kristiana mpankafy ny mozika sy ny gadona manaitaitra no voasarika ary manjary “mankafy” olona. Ny fomba fihira sy ny feo avoka etsy an-daniny hoe an’ireo mpihira toa miolakolaka sy be haingokaingony loatra, ny gadona sy ny zava-maneno ampiasaina dia fampiderana fahaiza manao. Ny fisehoana ety ivelany, misolo akanjo fara fahakeliny in-telo ao anatin’ny rindra-kira iray na clip iray, manginy fotsiny ny haingo sy firavaka miaraka amin’ny loko marevaka entin’ireo mpihira sy ny tariny. Tena very ilay fahatsorana ao amin’i Jesosy, tsy hita intsony Jesosy fa olombelona no “vedette”, mpihira no lasa “star”. Aoka ho fantantsika anefa fa i Jesosy irery ihany no tena “vedette”, Izy irery ihany no tena “star” (ilay kintana fitarik’andron’ny maraina hoy ny Apokalipsy 22:16)
Fankalazana ny tsingerintaona nahaterahany sy ny jobily:
Malaza ihany koa amin’izao fotoana ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahan’ny pastera, bishop, sy ny tariny, ny jobily noho fa folo taona, roapolo tao,…niasana teo amin’ny sehatry ny Tompo. Vola tsy toko tsy forohana no lany ny amin’ny fanatanterahana izany. I pastera mivady, bishop mivady no ivon’ny fotoana iray manontolo. Hanofana toera-pilanonana, hikarakarana hanim-pito loha, homena ankanjo sy kiraro farak’izay manaitra sy mamiratra, hanaovana “gateau d’anniversaire”, omena vola sy ny maro samihafa izay tsy ho voatanisa. Ny mpivavaka tsotra no manefa ny rehetra amin’io fotoana io, olona ao anatin’ny fahasahiranana, tsy dia manan-katao loatra no vesarana entana izay tsy nasain’i Jesosy ho entina Matio 23: 4 “Eny, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin’ ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ ny rantsan-tànany anankiray aza”. Entanina mafy mihitsy, ary rahonana, sy hozonin’ireo mpiara miasa akaiky amin’i pastera sy ny namany na i pastera mihitsy aza no mandatsa sy manao tenim-panozonana raha toa ka misy ny manohitra ny lamina voapetraka. Tsy misy tokony ahatahoran’izay mino an’i Jesosy anefa ny ozona, na i bishop io na i réverend io na iza io na iza hanozona azy satria hoy ny voasoratra ao amin’ny Ohabolana 26: 2 “Toy ny vorona mivezivezy sy ny sidintsidina manidina, Dia toy izany ny fanozonam-poana: tsy mba hihatra izany.” Fa mila miala tao anefa ianao raha hitanao fa tsy marina ary tsy ara Baiboly izay fomba fanao mba tsy hiombonanao ota aminy, sao ianao iharan’ny kapoka izay ho ataon’Andriamanitra aminy (Apok 18: 4)
Tsy mba fomba’i Jesosy ihany koa izany. Fanao tsy hita ao anaty Baiboly mihitsy ny fankalazana tsingeritaona, na jobily. Tsy hita tao amin’ny fiangonana voalohany mihitsy izany. Jesosy Kristy teto an-tany dia tsy mba nanao fankalazana ny andro nahaterahany izany, na koa nandidy ny hanaovana jobily azy. Tahaka izay koa ireo apostoly voalohany, tsy nahita mihitsy isika ka hoe iny i Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba nanentana olona hanao fety hankalazana ny tsingerintaona nahaterahany na koa hoe hanao jobily ho azy ireo. Olona tsotra ireo ary tsy tao anaty haitraitra, olona tsotra feno ny Fanahy Masina ary nifantoka tamin’izay zava-panahy. Namangy ny kamboty sy ny mpitondra teny sy ireo izay tao anatin’ny fahasahiranana no nataon’ireo satria aminy dia izy ireo no tokony hanome araka izay voasoratra ao amin’ny II Kor 12: 14-15 “…vonona hankaty aminareo aho, nefa tsy hahavaky tratra anareo; fa tsy ny fanananareo no tadiaviko, fa hianareo; fa tsy ny zanaka no tokony hihary ho an’ ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hihary ho an’ ny zanany. Ary izaho dia faly indrindra handany sy holanina hahasoa ny fanahinareo”. Mifanohitra amin’izany ny an’ireo apostoly moderna, mercenera no fiantsoan’i Jesosy azy ireo, mpangalatra sy jiolahy.
Nitazona sy nizara ny fampianaran’i Kristy ny apostoly sy ny fiangonana voalohany. Fa ireo izay mpitondra fivavahana ankehitriny no efa simba ny sainy ka niala tamin’ny fahatsorana ao amin’i Jesosy. Tsarovy ny voasoratra ery ambony fa tsy tokony hivoana, na hiala amin’izay foto-pampianaran’i Jesosy ny fiangonany raha tena fiangonany marina izy. (Heb 2: 1 sy 2Jao9)
4-Miverena amin’ny fampianaran’i Kristy
Mifohaza izay zanak’Andriamanitra ary miverèna amin’ilay loharano madio fa aza mba tahaka ireo rehetra voatanisa teo ireo fa tsy mba toy izany no nianaranao an’i Kristy. Efes4: 17-24 “Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin’ ny Tompo: ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan’ ny jentilisa amin’ ny fahafoanan’ ny sainy; fa efa tonga maizin-tsaina sy olon-ko azy amin’ ny fiainan’ Andriamanitra ireny noho ny tsi-fahalalana ao anatiny, noho ny hamafin’ ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin’ ny fijejojejoana hanao izay fahalotoana rehetra amin’ ny fieremana. Fa hianareo kosa, dia tsy mba toy izany no nianaranareo an’ i Kristy, raha Izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo, araka ny fahamarinana izay ao amin’ i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo [Gr. olonareo] taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ ny fitaka; fa mba hohavaozina kosa hianareo amin’ ny fanahin’ ny sainareo, ary mba hotafinareo ny toetra [Gr. olona] vaovao, izay noforonina araka an’ Andriamanitra amin’ ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana.”
Rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy dia nanafatra mihitsy mba ihainan’izy ireo amin’ny fahatsorana Matio 10: 16 “Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ ny amboadia [lopa] ; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà [Gr. aoka ho tsotra] tahaka ny voromailala”. Morà = aoka ho tsotra, tsy mifangaro, tsy mitapoka, madio, tsy misy kilema. Tohero ary fadio izay mifanohitra amin’ny fahatsorana rehetra mba ho mpanafa tsiny ny filazantsara ianao. Filipiana 1: 16
Miverèna, miovà amin’ny fanavaozana ny saina (se métamorphoser, miofo) hamantarana ny sitrapon’Andriamanitra ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao fa izao tontolo izao tsy tsotra fa ao anatin’ny fijejojejoana, ny haitraitra, ny seho ety ivelany….Rom 12: 2 “Ary aza manaraka ny fanaon’ izao tontolo izao; fa miovà amin’ ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’ Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina” .
Rom 12 :16. « Aza mihevitra izay hiavonavonana (izay zavatra ambony), fa aoka mba ho zatra amin’ ny fietrena (izay zavatra tsotra, zavatra maneho fanetre tena) hianareo. Aza manao ny tenanareo ho hendry. » Aoka izay zavatra tsotra tahaka an’i Jesosy no ahasarika.
Ny hazo fijalian’i Kristy no mitondra ho amin’ny fahatsorana.
Vahaolona, fomba tsotra ary tokana mba ho TSOTRA dia ny hazo fijalian’i Kristy.
Fantaro ny marina: Romana 6: 6
maty niaraka tamin’i Jesosy lay olona voapozina tao edena ka simba ny sainy niala tamin’ny fahatsoran’i Kristy. Maty dia nalevina niaraka tamin’i Kristy hanimbana ny tenan’ny ota
Niara natsangana taminy ho amin’ny fiainam-baovao , “métamorphosé” miofo, miova (Rom12: 1 – 2 Kor5: 17),
Hevero ny marina: Romana 6: 11
Hevero, ataovy ho toy ny efa maty ny amin’izao tontolo izao ianao
Ihaino amin’izay ny marina: Romana 6: 13
ko aza manolotra ny tenanao hanompo ny ota intsony fa atolory ny tenanao, ho an’ny Tompo ho fiadian’ny fahamarinana, toy ny efa maty nefa velona indray.
Avy ao am-po no inoana azy fa tsy asa ety ivelany toy ny fidirana ho mpandray ny fanasan’ny Tompo na diakona na mpiandry,…. Fa fo tsotra mibebaka ary mandray ny famelan-keloka sy ny fanavaozana nohon’ ny ran’i Jesosy sy ny hazo fijaliana.
Ny rà no vaha olana ny amin’ny ota natao: manadio, mamela heloka.
Ny hazo fijaliana no vaha olana amin’ilay olona mpanota: manamasina, mahatonga olona vaovao, rikoriko ota ary tsy te hanota intsony. Tsy te hanasaro-javatra intsony fa lasa tsotra tahaka an’i Jesosy.
“Fa izay an’ i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ ny faniriany sy ny filàny tamin’ ny hazo fijaliana.” Gal 5: 24
Fotoana izao hivoahana, hialana, hisarahana amin’ ireo izay mbola miziriziry ao ami’ny fahotana ary mandà ny fahatsoran’i Kristy.
Avelao Kristy ilay malemy fanahy sy tsy miavona am-po ihaina malalaka sy feno (100%) ny fiainany ao anatinao, hananao fiainana be dia be ary ahamoazanao ho azy ny vokatra takiany, anisan’izany vokatra izany ny fahatsorana. Amena!